Dugsi Cusub oo Maanta Laga Furay Degmada Kaxda ee Gobolka Banaadir – STAR FM SOMALIA
Dugsi Cusub oo Maanta Laga Furay Degmada Kaxda ee Gobolka Banaadir
STARFM RADIO: Waxaa maanta laga furay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir iskuul cusub oo lagu magacaabo Amal. Dugsiga Amal ayaa lagu baran doonaa heerarka kala duwan ee waxbarashada hoose,dhexe iyo sare.
xaflada furitaanka Dugsiga Hoose, Dhexe iyo Sare ee Amal ayaa lagu qabtay xanurta dugsiga oo ku taala degmada Kaxda ee Magaalada Muqdisho,waxaana ka soo qayb galay Isimo waxgar iyo waalidiinta ardayda wax ka barandoonta iskuulkan, Iskuulkan oo lugu magacab
Iskuulkan ayaa waxaa taabba galisay Hay’adda Tuisa ee dalka Jarmalka ayaa ah iskuul ardayda wax lagu bari doono qaab casri, waana kii ugu horeyay Ee Noocan oo kale ah Oo laga furo Degmada Kaxda ee Gobolka Banaadir.
Ugu horayntii waxaa furitaanka xaflada ka hadlay Yuusuf oo ka mid ah mas’uuliyiinta Dugsiga Amal wuxuuna ka hadalay baahida loo aasaasaay, taasoo uu ku sheegay in ay tahay sidii waxbarasho tayeysan loogu heli lahaa carruurta Soomaaliyeed eek u nool degmada Kaxda ee Gobolka Banaadir.
Waxaa sidoo kale goobta hadallo ka jeediyay qaar ka mid ah marti sharaftii kasoo qeyb gashay xafladda furitaanka Dugsiga Hoose,Dhexe iyo Sare ee Amal, kuwaas oo isugu jiray Culimaa’udiin, odayaal iyo waalidiin. Dadkii goobta ka hadlay ayaa sheegay sida ay ugu faraxsan yihiin furitaanka Dugsiga Al Amal, iyagoo muujiyay rajada ay ka qabaan Dugsiga ee ah inuu wax weyn kusoo kordhin doono Degmada Kaxda iyo degmooyinka ku dhow.
Maxamuud Cabdinaasir oo ku hadlayay magaca maamulka Dugsiga Hoose,dhexe iyo Sare ee Amal ayaa ka mid ahaa dadkii madasha ka hadlay, isagoo ballan qaaday in Dugsiga Amal uu soo bandhigi doono waxbarasho tayeysan iyo manhaj casri ah. Axmad ayaa intaa raaciyay in uu dugsigu ku dadaali doono sidii uu usoo saari lahaa arday ka dhisan dhinacyada aqoonta iyo akhlaaqda.
Ugu dambeyn, maamulka dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Amal ayaa si rasmi ah u shaaciyay in dugsigu uu billaabayo diiwaan gelinta ardayda dooneysa iney ku biiraan dugsiga maalinta Sabtida ah ee ay taariikhdu tahay 23 July 2016.
Xafladda ayaa ku soo gabagabowday jawi wanaagsan.